Cheap kwụ Fatịlaịza igwekota igwe na ndị na-arụ ọrụ | YiZheng
Kwụ igwe fatịlaịza igwe bụ ihe dị mkpa agwakọta akụrụngwa na mmepụta fatịlaịza. Ejiri ya gosiputa na oke arụmọrụ, ogo nke homogeneity, ọnụọgụ nnukwu ibu, obere ike oriri yana mmetọ dị ala.
Gịnị bụ kwụ Fatịlaịza igwekota igwe?
Na Kwụ igwe fatịlaịza igwe nwere akuku osisi nke nwere udiri nke nwere udiri ya n'uzo di iche iche nke di ka ihe eji akpukpo ahihia nke eji aka ya kpuchie ya, ma nwee ike imeghari uzo di iche iche n'otu oge, na-achota na ihe ndi ozo mejuputara. Kwụ igwe fatịlaịza igwe nwere ike iso ndị ọzọ inyeaka akụrụngwa dị ka eriri ebu ma ọ bụ ọchịchọ eriri ebu maka dum fatịlaịza mmepụta akara.
Gini ka eji emekota ihe eji eme nri?
Gwakọta bụ otu n'ime ọrụ dị mkpa na usoro mmepụta fatịlaịza niile. Na bụKwụ igwe fatịlaịza igwe a na-ewere ya dị ka akụrụngwa dị mkpa na nke ọma maka ịgwakọta nke granulu akọrọ, ntụ ntụ na mgbakwunye ndị ọzọ. A na-ejikarị igwekota fatịlaịza na-eme ihe iji jikọta ihe nke ọma na otu ma ọ bụ karịa ihe inyeaka ma ọ bụ ihe mgbakwunye ndị ọzọ na usoro mmepụta fatịlaịza ntụ ma ọ bụ usoro mmepụta fatịlaịza pellet.
Ngwa nke igwe igwe nri igwe nri
Na Kwụ igwe fatịlaịza igwe a na-ejikarị ya eme ihe siri ike (ihe ntụ ntụ) na mmiri mmiri siri ike (ihe ntụ ntụ & ihe ọkụkụ) na-agwakọta na ụlọ ọrụ fatịlaịza, ụlọ ọrụ kemịkal, ụlọ ahịa ọgwụ, ụlọ ọrụ nri, wdg.
Uru nke igwe fatịlaịza igwe
(1) Akwa nọ n'ọrụ: Bugharia tụgharịa tụba ihe dị n'akụkụ dị iche iche;
(2) Ọdịdị dị elu: Nkọwapụta kọmpụta na wiwi ndị na-atụgharị atụgharị jupụtara na hopper, na-agwakọta ịdị n'otu ruo 99%;
(3) Obere ihe fọdụrụ: Naanị obere ọdịiche dị n'etiti etiti na mgbidi, oghere na-emeghe ụdị;
(4) Nhazi pụrụ iche nke igwe nwekwara ike imebi nnukwu ihe;
(5) Ezi mma: Full weld na polishing usoro maka inggwakọta hopper.
Kwụrụ Fatịlaịza igwekota Ngosipụta vidiyo
Kwụ Fidio Fatịlaịza Igwe Nhọrọ
Enwere ọtụtụ Kwụ igwe fatịlaịza igwe ụdị, nke enwere ike ịhọrọ ma hazie dịka mkpa nke njirimara onye ọrụ. E gosipụtara usoro ọrụ aka ya dị na tebụl n'okpuru:
Nke gara aga: Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwekota igwe
Osote: Disc igwekota igwe
Okwu Mmalite Gịnị bụ Forklift Comdị Composting Equipment? Forklift Comdị Composting Equipment bụ igwe anọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-anakọta nchigharị, ịdị jụụ, ndinuak na ịgwakọta. Enwere ike ịrụ ọrụ ya n'èzí na ebe obibi. ...